थाहा खबर: कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्दैन, चुनावी तयारीमा लाग्‍नुस् : देउवा
'ओलीले लात हानेपछि प्रचण्डलाई ठिक्क भएको छ'
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै चुनावी तयारीमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
उनले भने, 'प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संख्या हाम्रो पुगेन। पार्लियामेण्टमा हाम्रो संख्या नपुगेर हामीले बोलाउन सकेनौँ। यो वास्तविकतालाई बुझ्नु पर्यो सबैले।'
उनले भने, 'कांग्रेसले वास्तै गरेन भन्या भएर आज बैठक बोलाएको छु। कुनै पनि किसिमको राष्ट्रिय एकता, अखण्डतामा आँच पुग्न नदिने गरी भयो भने त भयो, भएन भने पनि हामी त चुनावमा जानैपर्छ भोलि चुनावमा जानैपर्ने बाध्यता हुन सक्छ। चुनावमा जनताको मन जितेर हामीले सरकार बनाउनुपर्छ। जनताले बिर्सिसके।'
उनले भने, 'ओलीले सत्ता कब्जा गर्ने कोशिस गरेको छ। उसले चाहेर कब्जा हुँदैन। त्यसैले भोलिको दिनमा एक भएर लाग्नुपर्छ।'
उनले भने, 'मैले प्रचण्डलाई तपाईं नै हो प्रधानमन्त्री बन्नु भनेको हो नि। उनी उता गइदिए। तपाईं नै प्रधानमन्त्री बन्नु मान्छु भनेको हो मैले। बल्ल थाहा पाए प्रचण्डले आएर। धेरै पटक प्राईमिनिस्टर बनाउन खोजेको होइन हामीले प्रचण्डलाई? तपाईहरुलाई थाहा छ नि। खुट्टै नटेक्ने मान्छे। ओलीले लात हानेपछि ठिक्क भएको छ। अहिले म आफू प्राइमिनिस्टर हुन चाहेको पनि छैन। जोसुकै होस्।'
उनले भने, 'मैले पहिला भनेको थिएँ। तपाईहरुलाई याद होला। कम्युनिष्टको सरकार आयो भने तपाई रुन पनि पाउनुहुन्न भनेको थिएँ। दुईवटा पार्टी मिले। मिलेपछि जनताले भोट हाल्दिए के गर्ने। भोट त हाम्रो हातमा छैन नि। जनताले हराएपछि हारिन्छ के गर्ने रु जनताको माझ जाउँ। जनताको दिल जितौ। अनि हामी चुनाव किन जित्तैनौ? जनता यस देशको मालिक हो। जनताको भोट हामीले पाउनुपर्छ। तर जनताले दिदैनन् के गरुँ त। तर समानुपातिकमा त एमाले र हाम्रो बराबर छ।'